GTK + tonga miaraka amin'ny fanatsarana ao amin'ny kinova vaovao 3.24.1 | Avy amin'ny Linux
GTK + na fantatra amin'ny anarana hoe GIMP Toolkit, dia andiam-pitaovana multiplatform izay ampiasana azy hananganana interface-jotra mpampiasa. Amin'ny alàlan'ny fanolorana karazana widgets feno, GTK + dia mety amin'ny tetik'asa miainga amin'ny fitaovana kely iray monja ka hatrany amin'ny efitrano fampiharana.
GTK + Izy io dia sehatra fiampitana ka azo ampiasaina amin'ny Windows, Linux ary MacOS ary manana API mora ampiasaina ihany koa izy io, izay manafaingana ny fotoana fampandrosoana.
GTK + dia voasoratra amin'ny fiteny C programafa namboarina hatrany ifotony hanohana fiteny maro samihafa ary tsy voafetra ho C / C ++ fotsiny.
Ny fampiasana GTK + avy amin'ny fiteny fandaharana hafa toa an'i Perl sy Python (indrindra miaraka amin'ny mpanorina Glade GUI) dia manome fomba mahomby amin'ny fampandrosoana haingana.
1 Momba ny GTK +
2 Momba ny kinova GTK + 3.24.1 vaovao
Momba ny GTK +
GTK + rindrambaiko maimaimpoana ary ampahany amin'ny Tetikasa GNU . Na izany aza, ny fehezan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana an'ny GTK +, ny GNU LGPL, dia mamela ny mpamorona rehetra, eny fa na ireo izay mamorona rindrambaiko tompona trano aza, hampiasa izany tsy misy fahazoan-dàlana na mpanjaka.
GTK + dia nandray anjara tamina tetikasa maro sy sehatra lehibe sasany. Raha te hahalala izay eritreritry ny olona momba ny GTK + sy ny fomba nampiasana azy tamin'ny tetikasa ara-barotra.
Ny programa Qt sy GTK + miorina dia mampiasa karazana widgets samihafats »mamolavola ny interface interface mpampiasa anao.
Samy manolotra ankoatry ny zavatra hafa, lohahevitra, fomba ary karazana napetraka samihafa amin'ny alàlan'ny default, noho izany ny "fijery sy fahatsapana" dia samy hafa be.
«Qt (tononina «mahafatifaty» amin'ny teny anglisy) dia rafitra iray hampivelarana ny fampiharana multiplatform, be mpampiasa amin'ny fampivoarana ny programa interface interface (raha izany dia fantatra ho andiana «widgets») izy, na dia ampiasaina koa aza hamolavola programa tsy misy sary toa ny fitaovana console sy mpizara. "
Ny setan'ny widget dia misy ho an'ny tanjona fampidirana, miaraka amin'ireo fampiharana izay nosoratana ho an'ny Qt sy GTK +, amin'ny kinova lehibe rehetra.
Amin'ireto dia azonao atao ny mijery tsy manam-paharoa ny rindranasao rehetra, na inona na inona rafitra nanoratana azy.
Ny programa GTK + dia afaka mihazakazaka amin'ny tontolon'ny birao miorina amin'ny X11 na mpitantana varavarankely.
Na ireo tsy vita amin'ny GTK + aza, raha mbola apetraka ny tranomboky ilaina; ao anatin'izany ny macOS raha apetraka ny X11.app.
GTK + dia azo alefa eo ambanin'ny Microsoft Windows, izay ampiasain'ny fampiharana rindrambaiko malaza sasany toy ny Pidgin sy GIMP. wxWidgets, toolkit GUI miampita sehatra, dia mampiasa GTK + amin'ny Linux.
Ny seranana hafa dia misy ny DirectFB (ampiasain'ny mpampiditra Debian, ohatra) sy ny ncurses.
Momba ny kinova GTK + 3.24.1 vaovao
vao haingana Navoaka ny kinova vaovao an'ny GTK +3.24.1 izay havaozina ary manampy fiasa vaovao vitsivitsy.
Ao amin'ity kinova vaovao ity, Voalaza fa nisy fanatsarana natao tamin'ny fomban'ny bara lohan-doha.na, mandritra ny fanitsiana ireo fampitandremana mitsikera.
Amin'ity famoahana vaovao an'ny GTK + ity dia havaozina ny fandikan-teny Czech, Friulian, Russia ary Espaniola.
Araka ny voalaza tao amin'ny Adwaita dia ny fanatsarana ity famoahana vaovao ity dia voarain'ny fanatsarana ny fomban'ny bara.
Etsy ankilany, cMitohy ny fandaminana ao Wayland ary amin'ity famoahana vaovao an'ny GTK + 3.24.1 ity dia voaray ny fanamboarana tamin'ny fikirakirana ny lahatsoratra efa novaina.
Amin'ny lafiny iray, Windows dia nampihatra fikororohana moramora ary farany ny olana nipoitra sy ny fampitandremana mafy rehefa nikatona ny rafitra dia raikitra.
Amin'izao fotoana izao, mila miandry fotsiny ity kinova vaovao ity hametrahana ao amin'ny trano fitehirizam-bokin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux izahay.
Amin'izany dia ho azo atao ny manamboatra fanavaozana ny rafitra hahafahana mahazo ity kinova GTK + vaovao ity amin'ny solo-sainanao.
Na dia efa miasa aza ny Gtk + 4 ary amin'ny fanombohana an'io ny tsindry ilaina amin'ny fanavaozana dia navotsotra sy ny fifandanjana eo amin'ny fitoniana ary ny fanavaozana dia hiankina amin'ny fitoniana.
Toy izany koa, ny fanovana natao tato ho ato dia natao manokana hanatsarana sy hampiorenana io ampahan'ny API io, midika izany fa tokony hisy valiny ny fampiasam-bola sasantsasany any aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » GTK + tonga miaraka amin'ny fanatsarana ao amin'ny kinova 3.24.1 vaovao
Jhon Gesell Villanueva Portella dia hoy izy:
Salama misaotra betsaka anao namoaka ny lahatsoratra, amin'ny lafiny iray koa aho dia liana amin'ny fananganana rindranasa miaraka amina mpiserasera mpampiasa sary, hatramin'izao dia niara-niasa tamin'ny PyQt aho; Tiako ny hiasàn'ny lozisiko miaraka amin'ireo tahiry ary mianatra SQL aho ary tiako ampidirina ao anaty rindrambaiko narosoko koa ireo sary; Mbola hodinihiko ny fomba famonosana azy ho an'ny GNU / Linux sy Mac OS X, ho an'ny Windows raha hitako ny fomba nanaovana azy, dia toa tsy dia sarotra loatra izany, na dia ny vokatr'ity farany ity aza dia hitako fa manome rakitra azo tanterahina * .exe; Te hahafantatra ny fomba hataoko amin'ny fametrahana installer rindrambaiko aho araka ny fahita azy matetika, fa «SETUP» izay mamela ny mpampiasa farany hanaiky sy hanome ny manaraka fotsiny, dia tsy maintsy manohy mamaky isika, satria miambina hatrany aho amin'ny fidiranao manaraka, arahaba avy any Lima - Peroa.
Valiny tamin'i Jhon Gesell Villanueva Portella
Navoaka ny kinova fitsapana vaovao an'ny SparkyLinux 5.5